Date My Pet » Tips Kuva Chick Magnet
Unoita sei kuti uwane mukadzi hope dzako? Nepo anogona kutora vakomana vakawanda nguva yakazara miedzo uye zvikanganiso, takaita vakanyora nyora mazano saka unogona kuva chicks magineti uye kuwana mukadzi wako ramangwana.
muromo #1: Kuramba haisi nguva dzose kurambwa wechokwadi
Ngatitii ukasangana mukadzi akanaka, nditange kukurukura ipapo iwe utsvake iye ane mukomana. Nepo varume vakawanda Achatora kuti chiratidzo atendeuke uye kusiya, imi chaizvoizvo havafanire. Iyi haisi chiratidzo kurambwa kana chinhu nechiidzo kuti iye haafariri. Kana kukurukura yakafukidza zvakanaka chete kuseka uye kunyemwerera, tora avo sezvo zviratidzo zvenyu. Munhu zvechokwadi nyanzvi unyanzvi yokukwezva vakadzi zvechokwadi uye anoziva vakadzi vakanaka kana rinomuona. Just nokuti pari isina hakurevi kuti haumbofi une mukana. Uyu mukana wako ikoko kwaari. Vamwe yakanakisisa ukama uye michato kutanga kuburikidza ushamwari.
muromo #2: Kuva nemutsauko
Kumira kubva muchaunga rwakakosha kudanana Chiitiko. Kune varume vakawanda vachiti zvimwechete uye kutamba saizvozvo sezvo imi. Saka sei makamirireiko panze? NaJessica nechivimbo, kwete cocky. Iva zvechokwadi uye kuwana zvido uye mabasa aunofarira kuti imi vaviri mugove. pashure, kuva kwzvo pachako. Kana zviri zvaireva kuva, kuva uchava kukwezva mukadzi zvakanaka.
muromo #3: Ita Connection
Ndabvuma nezvose zvinobuda mumuromo womukadzi pamwe uchabvumirana dzose maonero ake uye nzira haisi nzira kukunda pamusoro mukadzi. Vakadzi hazvitombokohwewi kutsvaga murume inobvumirana zvose anodaro. Tinoda kufanana kwakaoma. Kukakavadzana nemaonero akasiyana, pfungwa, zvavanofarira, uye nokuchiva zvinobatsira kuumba zvakadzama kubatana. Mukadzi ari kutsvaga akatendeseka chokuita nemurume.
muromo #4: simba
Vakadzi kuedza wokuroorana naye ane simba uye chinobatanidza chepamusoro zvose mupfungwa. Nepo vamwe vakomana sokuti havagoni kukwezva mukadzi nekuti havana mari, basa guru, kana yakakwirira munzanga, kuti hachisi chokwadi. Vakadzi vanokwezvwa munhu hwakasimba hunhu uye ndiani anoziva zvaanoda. Asi regai Kukanganisa simba ichi. Nokuti murume ane Hupirisita simba kwechokwadi hakusi kutya kuratidza ake vasanonoka uye kudanana divi.
muromo #5: Kuvhara Deal
Varume vakawanda vasawira shamwari mapazi sezvo havazivi sei kuvhara ngaakuitirei. Pasina nokunama ngaakuitirei, iwe achakurumidza kunzi hanya uye rudo Guy shamwari, uye zvinosuruvarisa chinzvimbo ichi chichava zvakaoma kubvisa. Guys kuwana divi yakawana ndokurasikirwa mukana wakakwana kuti mukadzi wavo nokungoti havazivi zvokuita. Kuva zvishoma zvechisimba pamwe zeroing pamusoro anokosha zviratidzo revakadzi anotumira uchabatsira kuvhara ngaakuitirei.
By mukudzidzira apa mazano, zvirokwazvo kuva nzira yako yokukwezva mukadzi hope dzako.